Iindaba - Uhlaziyo lweFiva yeHagu yaseAfrika: Ukuqala koLimo oluSebenzayo lwaseVietnam kwiNdlela yokuBuyisa
Uhlaziyo lweFine Swine Fever yaseAfrika: Ukuqala koLimo oluSebenzayo lwaseVietnam kwiNdlela yokuBuyisa
Imveliso yengulube yaseVietnam isendleleni ekhawulezayo yokubuyisela.Ngo-2020, isifo se-African swine fever (ASF) eVietnam sibangele ilahleko malunga neehagu ze-86,000 okanye i-1.5% yeehagu ezibulewe ngo-2019. zinqabile, zincinci kwaye ziqulathwe ngokukhawuleza.
Izibalo ezisemthethweni zibonisa ukuba umhlambi weehagu ezipheleleyo eVietnam wawuyi-27.3 yezigidi zentloko ukususela ngoDisemba 2020, elilingana ne-88.7% yezinga langaphambili le-ASF.
"Nangona ukubuyiswa kweshishini leehagu laseVietnam liqhubeka, alikafiki kwinqanaba le-ASF, njengoko imingeni eqhubekayo kunye ne-ASF ihleli," yatsho ingxelo. "Imveliso yehagu yaseVietnam kuqikelelwa ukuba izoqhubeka nokuchacha ngo-2021, okukhokelela kwimfuno esezantsi yokungeniswa kwenyama yehagu kunye neemveliso zehagu kunango-2020."
Umhlambi weengulube zaseVietnam kulindeleke ukuba ufikelele malunga nentloko ye-28.5 yezigidi, kunye neenombolo ze-2.8 kwi-2.9 yezigidi zentloko ngo-2025. Ingxelo ibonise iVietnam ijolise ekunciphiseni umlinganiselo weengulube kunye nokwandisa umlinganiselo weenkukhu kunye neenkomo kwisakhiwo sayo semfuyo. Ngo-2025, ukuveliswa kwenyama kunye neenkukhu kuqikelelwa ukuba kufikelele kwi-5.0 ukuya kwi-5.5 yeetoni zeemitha ze-metric, kunye nehagu ibalwa kwi-63% ukuya kwi-65%.
Ngokwengxelo kaRabobank kaMatshi ka-2021, imveliso yengulube yaseVietnam iya kunyuka nge-8% ukuya kwi-12% ngonyaka. Ngenxa yophuhliso lwangoku lwe-ASF, abanye abahlalutyi boshishino baqikelela ukuba umhlambi weehagu zaseVietnam awunako ukuphinda uphile ngokupheleleyo kwi-ASF de kube semva kuka-2025.
Amaza oTyalo-mali olutsha
Okwangoku, ingxelo ibonise ukuba ngo-2020, iVietnam yabona utyalo-mali olungazange lubonwe ngaphambili kwicandelo lemfuyo ngokubanzi nakwimveliso yeehagu.
Imizekelo ibandakanya iifama ezintathu zeengulube ze-New Hope e-Binh Dinh, i-Binh Phuoc, kunye ne-Thanh Hoa iphondo kunye nomthamo opheleleyo we-27,000 yehagu; intsebenziswano yobuchule phakathi kweQela le-De Heus (eNetherlands) kunye neQela le-Hung Nhon ukuphuhlisa uthungelwano lweeprojekthi ezinkulu zokufuya kuMmandla oMbindi; I-Japfa Comfeed Vietnam Co., ifama yehagu yehi-tech kwiPhondo lase-Binh Phuoc enomthamo wabantu abayi-130,000 ngonyaka (okulingana ne-140,000 MT yenyama yehagu), kunye ne-Masan Meatlife yokuxhela kunye ne-process complex kwiPhondo laseLong An umthamo wonyaka we-140,000 MT.
“Qaphela, i-THADI – i-subsidiary yomnye wabenzi beemoto abahamba phambili eVietnam iTruong Hai Auto Corporation THACO – ivele njengomdlali omtsha kwicandelo lezolimo, ityala imali kwiifama ezifuywayo zehagu ze-hi-tech kwiphondo lase-An Giang naseBinh Dinh ezinomthamo we-1.2 Iihagu ezizizigidi ngonyaka,” yatsho ingxelo. “Iqela elikhokelayo elenze intsimbi eVietnam, iHoa Phat Group, nalo lityale imali ekuphuhliseni iFamaFeed-Food (3F) ikhonkco lexabiso kunye nakwiifama kwilizwe lonke ukuze kubonelelwe ngeehagu ezifuywayo, iihagu ezithengisayo, iihagu ezikumgangatho ophezulu ngenjongo yokubonelela ngeehagu zorhwebo ezingama-500,000 ngonyaka. emarikeni.”
“Ukuthuthwa kunye norhwebo lweehagu alukalawulwa ngokungqongqo, kudala amathuba okuqhambuka kwe-ASF. Amanye amakhaya amancinane afuya iihagu kumbindi weVietnam alahle izidumbu zehagu kwiindawo ezingakhuselekanga, eziquka imilambo kunye nemisele, ekufutshane neendawo ezihlala abantu kakhulu, nto leyo ephakamisa umngcipheko wokusasazeka kwesi sifo,” itshilo ingxelo.
Isantya sokwanda kwabantu kulindeleke ukuba sikhawulezise, ​​ngakumbi kwimisebenzi yeehagu kwimizi-mveliso, apho utyalo-mali kwizinga elikhulu, kubuchwephesha obuphezulu kunye nemisebenzi yokufama yeehagu edityanisiweyo ngokuthe nkqo iqhubele phambili ukuchacha nokwandiswa komhlambi weehagu.
Nangona amaxabiso enyama yehagu ehla, amaxabiso ehagu kulindeleke ukuba ahlale ephezulu kunamanqanaba e-ASF kuwo wonke u-2021, ngenxa yokunyuka kwamaxabiso emfuyo (umzekelo, ukutya, iihagu ezifuywayo) kunye nokuqhambuka kwe-ASF okuqhubekayo.
Ixesha lokuposa: Sep-26-2021
inkqubo yokondla indlu yeenkukhu, umphakeli wehagu, I-Evaporative Cooling Pad, Greenhouse Cooling Pad, inkukhu feeder, Iinkukhu zokutyisa inkqubo,